Khilaaf xoogan oo ka jira biyo xireen laga dhisayo deegaanka Laacdheere - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandKhilaaf xoogan oo ka jira biyo xireen laga dhisayo deegaanka Laacdheere
September 5, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Dhismaha biyo xireenka Laacdheere. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Khilaaf xoogan ayaa ka jira deegaanka Laacdheere oo kuyaala duleedka magaalada Garoowe kadib markii haayada Islamic Relief ay sheegtay in ay ka dhisayso biyo xireen.
Beeralayda deegaankaas ayaa kasoo horjeestay tilaabadan iyaga oo sheegay in biyo xireenkaas uu caqabad weyn ku keeni doono waraabka beerahooda.
Mid kamid ah beeralayda ayaa bog wareedka Puntland Mirror u sheegay in biyo xireenkaas uusan ahayn mid faaiido u ah dhammaan beeralayda deegaanka.
“Biyo xireenkan maahan mid beeralayda ka wada faaiideysan karaan ee waa mid loo sameynayo koox aan ka badnayn shakhsiyaad goobta deris la ah,” ayuu yiri mid kamid ah beeralayda, oo magiciisa dib u dhigay.
Walaaca khuburada arrimaha deegaanka
Khuburada arrimaha deegaanka ayaa aaminsan in biyo xireenka uu horseedi karo in uu guro ama qalalo toga Garoowe gaar ahaan inta u dhaxaysa Laacdheere ilaa Jibagale, deegaanadaas oo ah xoolo daaqsimeed iyo beero ka faaiideysta biyaha toga oo ka yimaada deegaanada hawdka sare.
Sida ay sheegeen Khuburada arrimaha deegaanka, dhibbaatooyinka kale ee ka dhalan kara biyo xireenkaas ayaa waxaa kamid ah; barakac qoysaska beeralayda ah, duurjoogta biyaha toga cabta oo dabar go’da, hoos u dhac ku imaan kara biyaha magaalada Garoowe sababtoo ah toga oo kor u soo qaada leefelka biyaha.
Khilaafka jira ayaa sidoo kale keeni kara gacan ka hadal ay dad ku dhiman karaan, sida khuburadu ay sheegeen.
Laacdheere oo ah deegaan beeralay ah ayaa dhanka koonfureed qiyaastii 12 kiilomitir ka xiga magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.
Golaha deegaanka Badhan oo doortay duq cusub
Diyaarada Djibouti oo duulimaadyo ka bilaabi doonta Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaarada Djibouti ayaa duulimaadyo ka bilaabi doonta garoonka diyaaradaha ee Garoowe, sida ay sheegtay. Diyaarada oo ay leedahay dowladda Jabuuti ayaa asbuuciiba labo duulimaad ka bilaabi doonta Garoowe dabayaaqada bishan December, sida ay [...]